BUKELA: ABAZALWANA BAKACUNNINGHAM 'ILIZWI' LOKUPHICOTHA OKUNGABONIYO - IINDABA
BUKELA: I-Cunningham Sisters 'Ilizwi' Uphicotho lweeMfama
Ngamaxesha ngamaxesha, iiMfama eziNgaboniyo kwi-NBC Ilizwi liyabothusa abaqeqeshi bakube beqaphele ukuba kukho isibini okanye abathathu eqongeni ngokulinganayo kunomntu odlala yedwa. Kwakunjalo nodade wabo duo I-Cunningham Sisters, owaphicotha ixesha lama-21 lomboniso.
melissa mack usatshatile
Abaqeqeshi u-Ariana Grande, uBlake Shelton, uJohn Legend kunye noKelly Clarkson baye bakha amaqela abo ngethemba lokufumana amagcisa asebenza ngokugqithileyo kolu khuphiswano lulandelayo lwabakhuphiswano.
Ngamanye amaxesha amagcisa akhetha umqeqeshi onokuqikelela xa esenza isigqibo sokuba uza kuqhubela phambili nabani. Ukufika kwayo kwi-duo yevangeli I-Cunningham Sisters, abafike apha kuyo yonke indlela ukusuka e-Ohio ukuya kuvavanyo, noClarkson akazange athembele ekukhetheni iLegend, nangona wayebonakala ngathi ungena ngexesha.
Oodade baseCunningham bazuze ukuHamba kwabaSihlalo ababini
Oodade baseCunningham, uMacy kunye noMarie, baqhuba uTori Kelly noKirk Franklin's Never Alone ngoPhicotho-zincwadi oluMfama. Abafazi baneminyaka eli-14 neli-15 ubudala kwaye bacebise iijaji ukuba kudala becula kwizakhiwo zecawa ixesha elide kangangoko banokuthi bakhumbule.
UClarkson kunye noLegend bajikeleza kwakhona kwakhona malunga naphakathi kwetune, nangona kunjalo iGrande nganye kunye noShelton banqande ukutyhala amaqhosha abo kubafazi.
Igorha lazama okona kunzima ukudibana noodade ngenxa yokuba bevela eOhio nangokongeza ekuculeni ecaweni, nangona kunjalo uClarkson wagxuma wabavumela ukuba bazi ukuba ukongeza unobungcali bokucula ivangeli. Babelane ngokwabelana ngokuthanda umculo wesizwe kunye nezinto ezininzi ezahlukeneyo.
Xa uLegend wazama ukutsiba kwaye wazisa abantu basetyhini ukuba wayengenalo iqela labasebenzi kwaye bonke abaqeqeshi abachaseneyo bekwenzile, khange kusebenze ngaphezulu kokudinga oko.
Iqela lam alivakali ngathi unje, akukho nto, uClarkson wabacebisa.
Emva koko, uClarkson uzimisele ukuzama ubuchule bakhe obutsha bokufundisa abagqatswa kukhuphiswano lwabo lonke, ebaxelela ukuba bafuna ukusebenza ngokudibanisa ngenxa yokuba bengakhange bavumelane ngokupheleleyo bahlala befuna ukufundiswa indlela yokuxuba kunye nokwenza ukukhanya okuphambeneyo kukhanye kwimizuzwana.
Igosa longeze ukuba wayenobungcali kuloo nto ngokukuko kwaye angabathanda ukuba babe kwiQela leQela.
Ekugqibeleni, i-duo ikhethwe ukuba ihambe kunye neQela Kelly kudluliso olothuse uClarkson ngokwaneleyo ukuba waphakama, wavuya, kwaye wasebenzisa iQela Blake lokuphumelela ikhamera yedijithali nje kancinci ukubonisa ubuchule obutsha kraca ukuba lilungu labasebenzi bakhe.
Iqela leQela lihlala likhona kwaye lingasebenzisi i-duo okanye i-trio eya kolu luhlu lulandelayo lwabakhuphiswano.
'Ilizwi' Ixesha lamaqela angama-21 ukuza kuthi ga ngoku
Umqeqeshi ngamnye usebenze ngokuzikhandla phantse ukugcwalisa abasebenzi. Apha ngezantsi kukho onke amaqela aya kwiziqendu zokugqibela zoVavanyo oluMfama.
Izigaba: Hulu Tech-Iindaba Amazon-Prime
UMegan ulahlekile kubaphangi
Isibonelelo semickey guyton savoy
mdala kangakanani vera jimenez
UJenelle ulutsha lomama 2 ukugula